Daily Reflection | Page 10 | Radio Veritas Asia
ယအ့ၪထိးယၥၭလၧယဂဲးယကၠီၪ့ဒၪယဝ့ၫတၭ ယဆၧထိးယၥၭနီၪတီၩအ့ၬ. ၦဂူၫဂၩထိးအၥၭလၧ ယဂဲးယကၠီၪ့အီၪဝ့ၫလဂၩcတၭ ယၥ့ၪယၫဆၧလၧ အဝ့ၫဒၪထိးအၥၭလၧ ယဂဲးယကၠီၪ့နီၪမွဲအတီၩလီၫ. နၥံၪဝ့ၫယီၩ နၥံၪအၪ့မၧၫ့ၦလ့ၩလၧစယီဟၫ့အအီၪ တၭအဝ့ၫဒၪထိးအၥၭလၧဆၧမွဲဆၧတီၩလီၫ. မွဲလါနၫ့ဘိၩ့ၦၡၩအဆၧထိးအၥၭနီၪ ယထိးဆၧၫ...
Updated date: Thu, 03/26/2020 - 07:16
လၩဎူၫဘံၪ့လဘံၪ့အဖၧၩ့နီၪယွၩအၥီၫ့ဂၫဘြံလၭ လ့ၩလၧဒိၩ့လဖျိၪ့လၧဂၫလလံၫ အဖၧၩ့ ကိၭဝ့ၫအမံၩ့လၧနၭဇရ့ၭလၧၦမုၪနၩ့လၧအဘၪအဲၪတၩ့လၧၦလၧ စဒၫဝံၭအဂံၪ့ဖၧၩ့လဂၩအမံၩ့မွဲစယိၥၭအအီၪတၭ,ၦမုၪနၩ့နီၪအမံၩ့မွဲနးမၫရံၫလီၫ. အၥီၫ့လ့ၩနုၬ လၧအအီၪတၭ စံၭဝ့ၫၦလၧအဘၪဆၧအခိးအတၩအၪလဂ...
Updated date: Wed, 03/25/2020 - 06:46
လၧဆၧလဖၪနီၪအလးခဲၫ့တၭ ၦယုဒၫဖိၪaမၩဘိၪ့လဘိၪ့တၭ ယ့ၫၡုၬလ့ၩထၪ့လၧယရုစလံၫ့လီၫ.- က မၫအီၪလၧယရုစလံၫ့အဖၧၩ့ လၧၥိၪတရၫ့အနဲၩ့ထံၭ တၭကိၭဝ့ၫအမံၩ့လၧၦဟံဘြႃၫအလူဘၥ့ၭစဒၫနီၪအီၪ လၧအခိၪၥိၭထၪ့အၥၭယဲဖျိၪ့ထီးနီၪလီၫ.- ၦခမျၧးဖၭ ဒိၪဘၪဆၧစူၭဆၧဆၫၦမ့ၬဘျီၪ ၦခၪ့ဂၭဂီၩ့ ၦအဎဲၫ့ အၥွံၬၥံၪအီၪ...
Updated date: Tue, 03/24/2020 - 09:22
လၧနံၫနံၩအလးခဲၫ့တၭ အဝ့ၫစဲၪ့ထၪ့ခွံၬ ထီးနီၪ လ့ၩထီၩ့လၧဂၫလလံၫအဖၧၩ့နီၪလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ယ့ၫၡုၬအနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫ ထိးအၥၭလၧမီၪလဂၩဂၩနီၪ ထီးအထံၫအခးဖၧၩ့ ဒၪဝ့ၫအလၩအဖၩ့အီၪအ့ၬ.- မၩ အၥၭဘဲၫနီၪတၭ ထီးအလ့ၩထီၩ့လၧဂၫလလံၫအဖၧၩ့ နီၪ ၦဂၫလလံၫဖိၪၥံၪ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫဒၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫ ယီၩအဝ့ၫၥ...
Updated date: Mon, 03/23/2020 - 09:10
လၧအလ့ၩဆၧအဘိၩ့ဘၭတၭ ဒၪဘၪၦအမ့ၬဘျီၪခီၫလၧအအီၪဖျဲၪဝ့ၫလံၩလံၩလဂၩနီၪလီၫ.- အထံၩအ ဖျဲၥံၪအၪ့စၪ့အဝ့ၫတၭ စံၭဝ့ၫ ရၭဘံၫဧ့ ၦလဂၩအီၪဖျဲၪဝ့ၫလၧအမ့ၬဘျီၪယီၩ မွဲလၧပလၫ အဆၧဒဲၩဘၭ အကၠီၩ့လဂၩလဲၪးမွဲၦလဂၩယီၩဧၪမွဲအမိအဖါလဲၪ. ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫၦလဂၩယီၩမွဲဂ့ၩအမိအဖါ...
Updated date: Sun, 03/22/2020 - 08:47
ၦစံၭလၩ့အၥၭလၧအမွဲၦအတီၩတၭလယူၭလယၪ့ဘၪၦဂူၫဂၩလနၩ့နၩ့နီၪ အဝ့ၫဒၪလီၩဘၪအဝ့ၫၥံၪလၧဆၧချဲၩ့ဒီၩ့လၩ့ယီၩၦနံၫဂၩလ့ၩထၪ့ဘၩဆိၪ ဖၪဆၧလၧ ဆၧလုဂံၪ့အဖၧၩ့လီၫ. အလဂၩမွဲၦဖၫရစံၫတၭအဝ့ၫလဂၩမွဲၦအၪ့ကံၩ့အခီၫ့လီၫ. ၦဖၫရစံၫလ ဂၩဆၧၫ့ထုၪ့တၭ အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫဘၩဆိၪဖၪဆၧဘဲၫယီၩယွၩဧ့...
Updated date: Sat, 03/21/2020 - 08:25
အဝ့ၫၥံၪချဲၩ့လိၬအၥၭနီၪ ၦကွ့ၭလံၬလဂၩနါဂၧၫ့ အဝ့ၫၥံၪ ကၩ့ကၩလိၬအၥၭတၭ ၥ့ၪယၫဝ့ၫလၧအချဲၩ့ ဆၧၫ့ဆၧလၧအဘၪတၭ လ့ၩစိၩဝ့ၫလၧအအီၪနီၪ အၪ့စၪ့ဝ့ၫ လၧဆၧမၪ လူၬထီးအလူၬအကျၩနီၪအခၪ့ထံၭမွဲထံၪထံၪလဲၪ.ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫလၧဆၧမၪလူၬထီးအလူၬ အကျၩနီၪ အခၪ့ထံၭ စံၭဝ့ၫဒၪ ၦအံၫစရ့လၭဖိၪၥံၪဧ့ ခိ...
Updated date: Fri, 03/20/2020 - 07:26
စယၫကူၭနီၪထၪ့ဖိၪစယိၥၭနးမၫရံၫအဝၩၦမုၪလၧအအီၪဖျဲၪန့ယ့ၫရှူၬ လၧဆၧကိၭဝ့ၫ ဎရံၬလီၫ.ယ့ၫရှူၬဎရံၬအီၪဖျဲၪဝ့ၫနီၪမၩအၥၭဘဲၫယီၩအမိ နးမၫရံၫ ဘၪအဲၪတၩ့လိၬယူၭအၥၭ လၧစယိၥၭတၭ ဘိၩ့အလချႃၭ အီၪဎုၬဒံၭဘၪနီၪ,ဆၧဖျီၪထၪ့ လၧအဒၧၩ့ထၪ့ဝ့ၫလၧၥၭမုဆံၫ့ဎံၪလီၫ. အဝၩစယိၥၭနီၪမွဲၦအတီၩအလီၩ့တၭမိမၩဂ...
Updated date: Thu, 03/19/2020 - 06:49
ဆၧမၪလူၬလဖၪမွဲဂ့ၩ မီၪၥံၪမွဲဂ့ၩတၭ ထီးဆီၫ့မီၪ့ လၧယဂဲၫမၩဂၭဂီၩ့နီၪလဂ့ၩ ယလဂဲၫမၩဂၭဂီၩ့ ဘၪယဝ့ၫတၭမွဲယဂဲၫမၩလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့လခီၫလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ မူၭခိၪဒဲဂၪ့ခိၪလချႃၭဒံၩခွံၬဒံၩဖျိၭဒံၭဘၪတၭ လံၬဆၧမၪလူၬအဖျိၪ့ဆံၭလဖျိၪ့မွဲဂ့ၩအနိၪ့ဖိၪလနိၪ့မွဲဂ့ၩလချႃၭ...
Updated date: Wed, 03/18/2020 - 09:16